Iinkwenkwezi ezimangalisayo kunye neefama ezinkulu!1.5hrs ukuya eFurano
ikwindawo enkulu yeefama ukuze ubone indawo yezolimo yexesha elithile kwaye uthabatheke yiMilky Way endaweni yokuphazamiseka okuthile.
yeyona ndlela isuka eFurano富良野 ukuya eAkan阿寒 okanye iDaisetsuzan national park大雪山・層雲峡
Ndinenkampani yabakhenkethi eququzelela ukhenketho olwenziwayo onokuthi uzive ngathi usekhaya ngemoto eqeshiweyo.
Inkqubo ye-Airbnb ayilibali ixabiso leentsana kodwa ixabiso leentsana alihlawulelwa. nceda ujonge ngezantsi.
Iyafumaneka;imatshini yokuvasa,isixhobo setafile,ibhafu,impahla yokupheka,i-oveni yemicrowave,isipheki sokufudumeza,ifriji,tv,indawo yokupaka yasimahla
I-Memuro esembindini wedolophu (i-2.5km ukusuka kwindlu) inevenkile enkulu kunye neendawo zokutyela ezaneleyo ezifana ne-ramen noodle, i-soba noodle, i-sushi etshiphu, izakaya pub. I-Obihiro eyi-30min ukusuka kwindlu enkulu kunye nesixeko esifanelekileyo (abemi abayi-160000) . Unokukhetha nayiphi na indawo yokutyela. I-Obihiro inegadi yeentyatyambo, iivenkile zeelekese kunye neefama zenkomo ezininzi. Kwiindawo ezingqongileyo, unokufumana i-ayisikrimu eyenziwe ngobisi olutsha okanye umzi wesonka samasi.
Ukuba sinomsitho omnandi wasekhaya kwaye ndinexesha ,Masihambe kunye!NgoMgqibelo ukuya ngoMvulo,Ihlabathi liphela lomdyarho wamahashe wokutsala isileji ubanjelwa kwisixeko saseObihiro 30min ukusuka endlini. Ukuba ufuna isikhokelo, Nceda ubuze ngaphambi kokuba ufike. Ukhenketho lokubona indawo luyafuneka.
Ukuba sinomsitho omnandi wasekhaya kwaye ndinexesha ,Masihambe kunye!NgoMgqibelo ukuya ngoMvulo,Ihlabathi liphela lomdyarho wamahashe wokutsala isileji ubanjelwa kwisixeko saseObih…